गाँजा सेवन गर्ने महिलामा यौन सन्तुष्टि कम हुन्छ कि बढी ? - Postmandu
गाँजा सेवन गर्ने महिलामा यौन सन्तुष्टि कम हुन्छ कि बढी ?
2019-05-22 PostmanduLeaveaComment on गाँजा सेवन गर्ने महिलामा यौन सन्तुष्टि कम हुन्छ कि बढी ?
एजेन्सी । अमेरिकामा हालसालै गरिएको एक अध्ययनले एकतिहाइ महिला यौन सम्पर्कभन्दा अगाडि गाँजाको प्रयोग गर्ने देखाएको छ । गाँजा पिएपछि यौन सम्पर्क राख्दा बढी सन्तुष्टि महसूस भएको र यौनप्रति इच्छा अझै बढेको अध्ययनमा संलग्न महिलाहरुले बताएका थिए । त्यस्तै, यौन सम्पर्कको बेला बढी लुब्रिकेशन (तरलता) को महसूस हुनुका साथै पीडा पनि कम भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।
अनुसन्धाताका अनुसार गाँजाले यौन स्वास्थ्यमा कस्तो असर पर्छ भन्ने विषयमा निकै कम अध्ययन भएका छन् । गाँजाले मस्तिष्कमा रहेको यान्नाबिनोइड रिसेप्टरमा असर पुर्याउँछ जुन यौनिक अवयवसँग सम्बन्धित छ ।
यो अध्ययन सीमित व्यक्तिमा मात्रै भएको हुनाले यसले यौन स्वास्थ्यमा गाँजाले केकस्तो असर पार्छ भन्ने निश्चित गर्दैन । तथापि, अध्ययनले यौन स्वास्थ्यका लागि गाँजाको प्रयोग उपयुक्त छ कि छैन, छ भने केकसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी अध्ययनको अन्य मार्ग भने प्रशस्त गरेको छ ।
राष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न तयार पिच पानीले पखालेपछि…
मोटोपन घटाउने गज्जबको उपाय थाहा पाउनुहोस्